Welcome to Pirates of Pearibbean ah! isagoo aad u orientation lagu buuxiyey goynaya of Somaliland Patriots Maalmihii Forest aad si fiican u yihiin marka aad u soo aflaxo Papa…kaliya 300 kisi ah inaad u tagto! Waxaan ka hor sheegay in waxa laga yaabaa, laakiin heerarka kuwani waa cajiib ah oo muhiim ah sida aasaaska waxbarashada, curiye kasta oo cusub si ay ciyaarta waxaa lagu tartiib tartiib ah samaynta heerarka ku xiga adag oo aan caqabad ku ah xiiso hawl-simaha Ra'iisul adag tahay in baxo aad ka fekereyso saamaynta ku tuurin aad telefoon galay balli duck ee…haa tahay iyo weliba waxaan caadadiisu ka hadlaan in! ‘
Heerka 16 na sharxayaa off galay iyo xaggaas hore ee buluuga ah leh hawsha ku shidida ilaa kuwa baaldiyo spunky, oo leh caqabado dhawr jidka dabcan. Iyadoo 90 000 dhibcood si aad shaqaysato u socotid mid u baahan kasta oo aad 20 baradho! Waxa aan ku talinayaa marka hore gaarno sare iyo adag si aad u hesho biinanka dab qaar ka mid ah xubnaha guddiga fulinta iyo habka adigu aad si qaar ka mid ah tirooyin hufan gubi